Iahveh - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Yahweh)
Iahveh no anarana iantsoana ny Andriamanitry ny Zanak' i Israely. Fanoratra ihany koa ny hoe Yahweh na Iahvé na Yahveh. Amin' ny Baiboly prôtestanta malagasy (1965) sy ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah dia ahitana ny hoe Jehovah. Ny Baiboly katolika malagasy (1938) talohan' ny farany dia ahitana ny hoe Iahve, fa ilay fanontana farany dia tsy ahitana an' io anarana io intsony izay nosoloana ny hoe "Tompo". Ny Baiboly iombonana eto Madagasikara (DIEM) koa tsy ahitana io anarana io fa nanolo izany amin' ny hoe TOMPO. Ny Baiboly hebreo (Tanakh) dia tsy ahitana afa-tsy ny renisoratra hebreo efatra יהוה (vakina avy ankavanana miankavia) izay azo soratana amin' ny litera latina hoe IHVH na YHWH.
2 Fampiasana ny anaran' Andriamanitra
2.1 Fanononana ny teny asehon' ny renisoratra IHVH
2.1.1 Nosoloana amin' ny hoe Adonay
2.1.2 Iehovah na Jehovah na Yehowah
2.2 Fampiasana na tsy fampiasana ny hoe IHVH na YHWH
2.3 Ny anarana hoe IHVH ao amin' ny Torah
3 Ny hevitr' ilay anarana
3.1 Ny hevitry ny hoe IHVH araka ny Baiboly
3.2 Ny Eks. 3.13-14 ao amin' ny Baiboly malagasy
3.2.1 Araka ny Baiboly prôtestanta
3.2.2 Araka ny Baiboly katôlika
3.2.3 Araka ny Baiboly DIEM
3.2.4 Araka ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah
Ny hoe Iahveh dia azo avy amin' ny fanampiana zanatsoratra (a sy e) ny renisoratra mifanarakaraka יהוה ihvh (iod - he - vav - he) izay matetika soratana amin' ny sora-baventy latina hoe IHVH. Renisoratra hebreo no nadika amin' ny litera latina hoe "i" na "I" dia ny litera hebreo iod. Io litera io no nanjary soratana hoe "j" (vakina hoe /ʒ/ /dʒ/, na /dz/) amin' ny tenim-pirenena sasany. Ao amin' ny Baiboly hebreo dia ny litera efatra יהוה (HVHI) vakina avy ankavanana miankavia no voasoratra fa tsy misy zanatsoratra.
Fampiasana ny anaran' AndriamanitraHanova
Fanononana ny teny asehon' ny renisoratra IHVHHanova
Ny fanononana ny teny asehon' ny renisoratra hebreo יהוה ao amin' ny Baiboly hebreo (na Tanakh) izay soratana amin' ny litera latina hoe IHVH dia tsy fantatra mazava, hoy ny mpino ào amin' ny jodaisma sy ny mpikaroka momba ny Baiboly sy momba ny teny hebreo maro.
Nosoloana amin' ny hoe AdonayHanova
Tao amin' ny tempoly jiosy dia lasa fanao ny tsy manonona ny anaran' Andriamanitra mba ho fanajana azy. Nanomboka tokony tamin' ny vanimpotoan' ny fahababoana izany. Matetika dia nosoloana ny teny hoe Adonay, izay midika hoe "Tompo", ilay anarana rehefa mamaky teny na miresaka ny amin' Andriamanitra ny Jiosy.
Ny hoe Iahveh na Yahweh dia fanoratana nifanarahana avy ao amin' ireo Baiboly amin' ny fiteny hafa natonta taty aoriana ka ampiasain' ireo mpikaroka momba ny Baiboly. Tsy fantatra anefa ny tena zanapeo tokony hiaraka amin' ireo litera efatra ireo amin' ny teny hebreo. Ny zanapeo a sy o ary e dia tsy avy amin' ny teny hoe Adonay fa nifanarahana fotsiny taty aoriana sady ivelan' ny fivavahana jiosy mba hahafaha-manonona an' ilay anarana.
Iehovah na Jehovah na YehowahHanova
Mba hampahatsiahivana ny mpamaky ny fanoloana ny יהוה Ihvh amin' ny hoe Adonay dia nasisika ny marika manambara ny zanapeo ao amin'io teny io ka nahazoana ny hoe Iahovah (Yahowah) na Iehovah (Yehowah). Avy amin'io hoe Iehovah na Yehowah izay natao ho fampahatsiahivana ny hoe Adonay io ny hoe Jehovah hita ao amin'ny fandikana ny Baiboly sasany toy ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy. Efa tany amin' ny taonjato faha-19 no nanomboka ny tsy fampiasan' ny mpandika teny maro ny hoe Jehovah taorian' ny fikarohana momba ny teny hebreo nataon' ilay manam-pahaizana alemàna atao hoe Wilhelm Gesenius.
Fampiasana na tsy fampiasana ny hoe IHVH na YHWHHanova
Ny Jiosy, izay milaza ho tsy mahafantatra ny tena fanononana ilay anarana, dia tsy manonona azy. Araka ny hevitr' izy ireo dia fanajana ihany koa ny didy mifehy ny fampiasana ny anaran' Andriamanitra izay tsy azo tononina izany, dia ny didy milaza hoe: "Aza manonona foana ny anaran' i IHVH Andriamanitrao". Amin' ny Jiosy dia fanononam-poana ny anaran' Andriamanitra ny fanononana io anarana io, na inona antony, na aiza toerana anaovana izany.
Ny Kristiana maro dia nanonona ary mbola misy manonona azy amin' ny endrika samihafa toy ny hoe Iahvé, Jehovah, sns. ary ireo asasoratra fikarohana dia mampiasa ny hoe Yahweh. Taty aoriana dia maro ny Baiboly kristiana tsy ahitana intsony na ny hoe Iahve na ny hoe Jehovah fa nanolo azy amin' ny hoe Tompo. Ny ankamaroan' ireo Baiboly prôtestanta amin' ny teny frantsay dia mampiasa ny hoe l'Eternel ("ny Mandrakizay"). Ny mpandika tenin' ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah (Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin' ny Tontolo Vaovao) dia nitazona ny anarana hoe Jehovah.
Nanomboka tamin' ny naha-Papa an' i Benoa XVI (taona 2005) dia tsy nanoratra intsony ny hoe Iahve ny Eglizy Katôlika mba ho fanajana ny Jiosy izay tsy manonona io anarana io.
Ny anarana hoe IHVH ao amin' ny TorahHanova
Ao amin' ny Torah, izay fitambaran' ny boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly, ny anarana iantsoana an' Andriamanitra dia indraindray ny hoe Iahveh na Yahweh ary indraindray koa dia ny hoe Elohim. Heverin' ny mpikaroka Julius Wellhausen ho avy amin' ny loharano atao hoe Iahvista na Jahvista (hafohezina amin' ny hoe J) ireo lahatsoratra ao amin' ny Torah izay manao ny anaran' Andriamanitra hoe Iahveh na Yahveh ireo. Izany dia anehoany fa tsy olon-tokana no nanoratra na tsy loharano tokana no nanovozana izay voasoratra ao amin' ireo boky ao amin' ny Pentateoka fa samihafa. Ny manampy an' io Loharano iahvista (J) io dia ny Loharano elohista (E) sy ny Loharano deoteronomista (D) ary ny Loharanon' ny mpisorona (P).
Ny hevitr' ilay anaranaHanova
Ny hevitry ny hoe IHVH araka ny BaibolyHanova
Ny hevitry ny anarana hoe יהוה Iahveh na Jehovah dia notsoahan' ny mpanao heviteny amin' izay voalaza ao amin' ny Eksodosy (Eks. 3.13-14).
Izao no navalin' Andriamanitra an' i Mosesy (na Môizy) raha nanontany azy ny anarany izy: אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה / Ehieh Asher Ehieh. Ny hoe IHVH izany dia avy amin' ny matoanteny hoe אֶֽהְיֶ֖ה / ehieh. Izany dia manambara ny fisian' Andriamanitra amin' ny fotoana rehetra na ny fampisiany ny zavatra rehetra. Ny hoe ehieh dia endriky ny matoanteny היה / hih miaraka amin'ny mpisolotena voalohany (malagasy: "aho, izaho") amin'ny fanehoan-javatra tsy efa, izay midika hoe "misy", "manjary", "mampisy" na "mampanjary". Azo ilazana ny ankehitriny sy ny hoavy io endriky ny matoanteny io.
Ny Eks. 3.13-14 ao amin' ny Baiboly malagasyHanova
Tsy mitovy ny fandikana amin' ny fiteny malagasy ny fehezanteny hebreo hoe אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה / Ehieh Asher Ehieh izay tsy ahitana afa-tsy teny telo eto. Lava dia lava izy ao amin' ny Baiboly prôtestanta (Ny Baiboly) sy ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah (Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin'ny Tontolo Vaovao) ary ny Baiboly DIEM, fa fohy kosa izy ao amin' ny Baiboly katôlika (Ny Baiboly Masina).
"Ehieh Asher Ehieh":
"Izaho no Ilay Misy" (Ny Baiboly Masina, 2011)
"Izaho no Ilay hatrizay ka ho mandrakizay" (Ny Baiboly DIEM, 2004)
"Hoporofoiko fa Izaho ilay mahavita izay iriko" (Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin' ny Tontolo Vaovao, 1984)
"Izaho, Izay Izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay". (Ny Baiboly, 1965)
Araka ny Baiboly prôtestantaHanova
Ary hoy Mosesy tamin' Andriamanitra: Indro, rehefa tonga any amin' ny Zanak' Israely aho ka manao aminy hoe: Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ahy ho atỳ aminareo, ary hanao amiko kosa izy: Iza moa no anarany? dia ahoana no havaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin' i Mosesy: Izaho, Izay Izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay. Ary hoy koa Izy: Izao no ho lazainao amin' ny Zanak' Israely: Izaho Izay Izy no efa naniraka ahy ho atỳ aminareo. (Ny Baiboly, 1965).
Araka ny Baiboly katôlikaHanova
Ary hoy i Môizy tamin'Andriamanitra: "Izao àry dia ho any amin' ny Israelita aho, ka hilaza aminy hoe: "Irahin' ny Andriamanitry ny razanareo aho ho atý aminareo." Kanefa raha tahiny ireo manontany ahy hoe: "Iza no anarany?", dia ahoana no havaliko azy ireo?" Dia hoy Andriamanitra tamin' i Môizy: "Izaho no Ilay Misy". Ary hoy ihany Izy hoe: "Izao no holazainao amin'ny Israelita: "Ilay Misy" no maniraka ahy ho atý aminareo." (Ny Baiboly Masina, 2011).
Araka ny Baiboly DIEMHanova
Ka hoy i Mosesy tamin' Andriamanitra: - Eny àry fa hankany amin' ny Israelita aho izao hilaza aminy hoe: "Ilay Andriamanitry ny razanareo no naniraka ahy ho atỳ aminareo." Saingy hanontany ahy ny anaranao izy, koa inona no havaliko azy? Dia hoy Andriamanitra tamin' i Mosesy: - Izaho no Ilay hatrizay ka ho mandrakizay. Koa izao no holazainao amin' ny Israelita: "Ilay hatrizay ka ho mandrakizay no naniraka ahy ho atỳ aminareo." (Ny Baiboly DIEM, 2004)
Araka ny Baibolin' ny Vavolombelon' i JehovahHanova
Hoy anefa i Mosesy tamin’ Andriamanitra: Aoka ary hatao hoe tonga any amin’ ny zanak’ Israely aho, ary miteny hoe: ‘Ilay Andriamanitry ny razanareo no naniraka ahy ho atỳ aminareo.’ Ary miteny amiko ry zareo hoe: ‘Iza no anarany? Dia inona no havaliko?” Dia hoy Andriamanitra tamin’ i Mosesy: “HOPOROFOIKO FA IZAHO ILAY MAHAVITA IZAY IRIKO.” Ary hoy koa izy: “Izao no holazainao amin’ ny zanak’ Israely: ‘Ilay HOPOROFOIKO no naniraka ahy ho aty aminareo.’ ” (Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin' ny Tontolo Vaovao, 1984)
Fanehoan-javatra tsy efa
↑ 1,0 et 1,1 Tsy misy litera roa manavaka ny "i" amin'ny "y" ny abidy hebreo fa iray ihany dia ny iod. Toraka izany koa: tsy misy litara roa manavaka ny "v" sy ny "w" dia ny vav na waw.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Iahveh&oldid=1042819"
Dernière modification le 9 Janoary 2022, à 07:36
Voaova farany tamin'ny 9 Janoary 2022 amin'ny 07:36 ity pejy ity.